अर्थ Archives - Page3of 290 - Lokpath Lokpath
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:१९
आजको विनिमयदरः कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १२ गते सोमवारका लागि १ अमेरिकन डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्सेमा उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार आज उच्च अङ्कले बढेर एक हजार ५०० माथिको विन्दुमा
काठमाडौं । सरकारले उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएको पुर्नकर्जा कार्यक्रममा आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न साना तथा मझौला कर्जालाई
नेप्से परिसुचक साढे २ वर्ष यताकै उच्च, “अर्थमन्त्री हट्ने हल्लाले यस्तो भयो” !
काठमाडौं । आइतबार शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेप्से परिसूचक साढे दुई वर्ष याताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार रकम साढे ३ अर्ब भन्दा माथि पुगेको
काठमाडौं । “बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि” भन्ने मूल नाराका साथ जनमैत्री बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एन आई सी एशिया बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक मुद्धती निक्षेप
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५३औँ वार्षिकोत्सवसम्म आइपुग्दा संस्थान जीवन बीमा कोषमा २५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । मुलुकमा स्थापित १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीका बीचमा संस्थाले बीमा कोष
तोलामा ७ सयले बढ्यो सुन, रच्यो नयाँ इतिहास !
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदीको मूल्यमा बृद्धि भई मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । शुक्रवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ७८ हजार १ सय रहेको थियो । भने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन ११ गते आइतवारका लागि १ अमेरिकन डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो
लम्की । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सत्ती भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा राजश्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । सो नाकाबाट अधिकांश कृषि तथा पशुजन्य सामग्री आयात हुने गर्दछ । क्वारेन्टाइन नहुँदा
लघुवित्तका ऋणीले पाएनन् ब्याज अनुदान
देशका ९० लघुवित्त संस्थाले तीन हजार ८६१ शाखामार्फत रु दुई खर्ब ५६ अर्ब लगानी गरेको जनाएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा २८ लाख पाँच